Waltahiinsa Ijaaramuu Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa : Oromo Democratic Front
Posted by ODF on Thursday, November 3, 2016 · Leave a Comment
Uummattootni Itiyoophiyaa bilisummaa, diimokirasii fi haqaaf qabsoon taasisan sadarkaa guddaa irra gahuu isaa hundi keenya ni hubanna. Waggoota digdamii-shanan darbaniif sirna bittaa TPLF jalatti rakkoon ummata keenya irra gahe daangaa waan darbeef sirna kana jalatti garbummaadhaan buluun nu gahe jedhanii gara-kutannoodhaan falmii jalqabuun isaanii qabsoon daandii adda addaatiin waggoota dheeraadhaaf adeemisifamaa ture sadarkaa ol’aanaa irra gahuu isaa kan ifatti mul’isee dha. Sababa qabsoo mirgaa hardhallee gaggeeffamaa jiru irraan kan ka’e, biyyi Itiyoophiyaa garamitti akka deemtu haala nama wallaalchisu irra gahee jira.
Karaa tokko ummattootnni sirni bittaa kun akka jijjiiramu gaafatan loltoota mootummaa meeshaa waraanaa hammayyaa hidhatan fuundura harka duwwaa dhaabbatanii bilisummaadhaaf kan falmaa jiran yoo ta’u karaa biraa ammoo meeshaa waraanaa hidhatee saamicha qabeenya ummataa waggoota digdamii-shanan darbaniif adeemisisaa tureen ol’aantummaa humnaa fi diinagdee of harkatti galfate abdachuudhaan lammiiwwan mirga namummaa gaafatan ajjeesaa, manneen-hidhaa keessatti naqee gidiraa agarsiisaa, kaanimmoo akka baqatanii biyyaa bahan dirqisiisaa taayitaa irra turuudhaf yaalii taasisaa akka jiru argina. Haala baay’ee yaaddessaa ta’e kana callifnee ilaaluu hinqabnu jennee kan kaane dhaabbileen siyaasaa karaa adda addaa qabsoo gaggeessaa jirru sirna mootummaa cehumsaa kan qaamonni dhimmi biyya keenyaa ilaalu hundi irratti walii-galan ijaaruudhaaf haala nudandeessisu irratti waliin taanee hojjachuudhaaf dhaaba Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa jedhamee beekamu bu’ureessineerra.
Mul’anni (vision) Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa sirna mootummaa mirga ofiin of bulchuu biyyattii eeguu, mirga sabaaa fi sab-lammii kabajuu; aadaa fi seenaa hawaasaa calaqisiisuu; sabaa fi sab-lammiiwwan biyyattii seeraa fi wal-qixxummaadhaan keessumsiisuu fi guddinni-diinagdee fi badhaadhinni akka dagaagu kan taasisu sirna feederaalaa dhugaa ijaaruu dha.
Ergamni (Mission) Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa amoo ummattoota biyyattii hunda haalaan qindessee kaayyoo biyyoolessaa tokko jalatti waliin hiriirsuudhaan mootummaa fedhii ummataatiin ala humna qawweetiin taayitaa qabatee ukkaamsee bitaa jiru qabsoo karaa nagaa (qawwee maleessa ta’een) akka dhabamsiisan taasisee mul’ata sochii kanaa isa sirna federaalaa diimookiraatawaa utubuudha.
Nuti dhaabonni sochii biyyaa kana hundeessine murtii guddaa kana irra kan geenye lafumaa kaanee miti. Rakkoowwan biyyattii kan walxaxaa ta’an haalaan qo’annee, tarkaanfiiwwan keenya darban xiinxallee yoo ta’u, namoonni siyaasaa kamiyyuu waliin hidhata hinqabne kan haalli biyyi keenya yaroo ammaa keessa jirtuus ta’ee garri itti adeemaa jirtu isaan yaaddesse kaka’umsa mataa isaaniitiin dhaabota keenya waliif galchuudhaaf ji’oota dheeraadhaaf yaalii taasisan irratti hundoofnee akka ta’e jala murree ibsuun barbaachisaa dha. Kanaaf jecha sochiiwwan siyaasaa biyya keenya keessatti baramoo kan ta’an wal-hamii, daandii sirrii hintaneen wal-qeequu fi qabsoo du’aa jiraa kan ummattoonni keenya adeemsisaa jiran kan hingargaarre adeemsitoota diigoo ta’an hambisuudhaaf yookii dura dhaabbachuudhaaf jecha waan sochiin biyyaa kun ta’ee fi hintaane ifa goonee dubbachuun barbaachisaa dha.
1. Dhaabonni sochii biyyaa kana ijaarre ilaalcha ummattoota biyya keenyaa hunda yookii dhaabota mootummaa taayita irra jiruun morman hunda bakka buuna yookiin hammanneerra ilaalcha jedhu hin qabnu. Haata’u malee dhaabota siyaasaa beekamoo ta’an sochii kana keessatti dabaluudhaaf karaa keenyas ta’ee karaa obboloota keenya warra nu arffan akka walitti dhufnee bakka har’a geenye kana geenu taasisanii yaaliiwwan heddu godhamaa akka turan uttuu hin ibsiin darbuu hin feenu. Yaaliiwwan gurguddoo jedhamuu danda’an taasifnus, bu’aa barbaanne garuu argachuu hin dandeenye. Rakkoowwan biyya keenyaa guyyaa dhaa gara guyyaatti hammaachaa deemaniiru. Uummattootni keenya ammo wal-taanee akka sochoonu deddeebisanii gaafachaa turaniiru. Haalota kana irratti hundoofnee ennaa ilaallu, dhaabota siyaasaa walitti fiduu yaaluun yaroo dheeraa amma ammaatti fudhate fudhachuun sirrii akka hin taane, sirumayyuu bakka dhaquu barbaannu gawuudhaaf sochii waliinii taasisuun yoomuu caala barbaachisaa ta’uu isaa waan hubanneef sochii biyyaa kana ijaaruudhaaf murtessineerra. Amma danda’ametti garuu dogoggoroota wal-ta’insa dhaabota diiguu danda’an tokko tokko hambisuudhaan; jechuun haala dogoggoroota darban keessa nu hinseensifneen bakka tokko irratti calqabuun dirqama waan ta’eef dhaabonni kanaa gadittti maqaan isaanii ibsame tarkaanfii sochii biyyaa Itiyoophiyaa ijaaruu fudhataniiru. As irratti gara fuunduraatti dhaabota siyaasaa dhimmi Itiyoophiyaa ilaalu hunda (all stakeholder organizations) sochii kana keessatti dabaluudhaaf yaalii wal irraa hincinne kan taasifnu ta’uu keenya jala unnee dubachuu barbaanna.
2. Dhaabonni Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa kana bu’ureessine daandii gara garaatiin ummata bakka buuna jennu keessattis sochi gochaa jiraachuun keenya akkuma eegametti ta’ee akkaataa qabsoo keenya itti gaggeessinu irratti garaa garummaa qabna. Haa ta’u malee dhaabni tokko akkaataa qasboo ittiin adeemsisu ilaalchisee daandii hordofuu barbaadu dhaabni miseensa sochii kanaa ta’e tokko balaaleffachuu yookiin mormuu irra hin jiraatu. Kana jechuun dhaabonni sochii kana ijaarre daandii qabsoo saganataa dhaaba keenyaa bakkaan gawuudhaaf nugargaara jennee amanne hunda hordofuudhaaf bilisa jechuudha.
3. Sochii biyyaa haaraa kana ennaa ijaarru rakkoolee biyyi keenya waggoota digdamii-shanan darbaniif keessa turte, ammas keessa jirtu, kan uume sirni TPLF hundee irraa buqqa’ee sirna haaraa dimokiraatawaa ta’e kan uummattoonni keenya itti amananii fi fedhii guutuudhaan fudhataniin bakka bu’uu akka qabu waliif galleeti. Walii galteen, mariin yookiin adeemsi araaraa kamiyyu ejjannoo keenya kana akka geeddarru nu hin taasisu.
Qabxiiwwan sadan kana hubannoo keessa galchinee tarkaanfiiwwan ijaarsa sirna cehumsaa bu’ureesuu nu dandeessisan fudhachuuhaaf Sochii Biyyaa Itiyoophyaa ijaaruu keenya ennaa labsinu qaamonni dhimmi biyya keenya ilaalu hundi, keessumaa ammo rakkoowwan sirni TPLF uumee irraan kan ka’e haalli keessa jirtan obsaan kan bira hin darbamne ta’uu hubatanii harka isaanii duwwaa qawwee loltoota Agazi dura dhaabbatanii falmaa kan jiran uummattoonni keenya nuwaliin akka hiriiran amantii guddaa qabna.
Dhuma irrattis dhaabonni adda addaa dhimmi biyya keenyaa isin ilaalu hundi biyya keenya keessatti taayitaa mootummaa duwwaa otoo hinta’iin ol’aantummaa humna waraanaa fi diinagdee dhuunfaadhaan tohatee uummata keenya ukkaamsee garbummaa jalatti bitaa kan jiru sirna TPLF dhabasiisuun hojjaa boruuf jedhamuu hinqabne ta’uu isaa hubattanii akka nuwaliin hiriirtan waamicha keenya irra deddeebinee isiniif dhiheessina.
Bilisummaa, dimookiraasii fi haqa saboota Itiyoophiyaa hundaaf!!
Bu’ureessitoota SOCHI BIYYAA ETHIOPIA
 Adda Diimookiraatawaa Oromoo
 Arbanyooch Ginbot 7 Sochii Tokkummaa fi Diimookiraasii
 Paartii Ummata Afar
 Sochii Diimookiraasii Biyyoolessa Sidaamaa
Onkoloolessa 30, 2016